Türkiye’nin Yüksek Hızlı Tren Garları – RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraTurkey ayaa High Speed ​​Tareen Stations
11 / 11 / 2019 06 Ankara, 42 Konya, Gobolka Central Anatolia, tareenka, GUUD, Tareenka dhakhso ah, TURKEY
Speed ​​Tareen Stations High Turkiga, Kadib hirgalinta Mashaariicda Xawaaraha Xawaaraha Sare ee Magaalada Ankara-Istanbul, Ankara-Konya, Ankara-Sivas, Ankara-Bursa iyo Ankara-Izmir, dhismayaasha Xarumaha Xirmooyinka Wareega ee loo yaqaan “YHT Station Complexes”, kuwaas oo muhiim u ah dhismaha tareenka, ayaa mudnaanta la siinayey waxaana dhismaha mudnaanta la siinayaa dhisidda Xarumaha Xirmooyinka Saldhigga. daraasado ayaa la bilaabay.
Xarunta Ankara YHT Station waxaa loo naqshadeeyay iyadoo la tixgelinayo heerarka caalamiga ah iyo iyadoo la baarayo qaab dhismeedka, qaabka, isticmaalka iyo noocyada hawlgalka ee saldhigyada tareenka xawaaraha sare ee waddamada kale.
Mashruuca, oo hadafkiisu yahay inuu Xarunta Ankara iyo hareeraheeda ka dhigo xarun soo jiidasho leh oo caasimadda ah, ayaa loogu talagalay in lagu matalo aragtida cusub ee waaxda oo astaan ​​u ah xawaaraha iyo firfircoonaanta iyo sidoo kale maanta tikniyoolajiyadda iyo fahamka qaab dhismeedka.
194 kun oo m2 dhisme iyo 33,5 kun m² dhisme oo ku yaal agagaarka xarunta rugta agab ee 'NYT Station Hotel, xarunta dukaamaysiga, maqaayadaha, meelaha baabuurta la dhigto ee gudaha iyo banaanka, isku xirka dhulka hoostiisa mara iyo tareenada.
Saldhigga cusub ayaa leh qalab dhererkiisu yahay 12 mitir oo dhererkiisu yahay 400 iyo khadadka 3, kuwaas oo isku halayn kara 6 YHT set oo isku mar ah. Saldhigga Tareenka ee Xawaaraha Sare ee Ankara 29, oo lagu dhisay moodalka Dhiska-Operation-Transfer, ayaa la galiyay adeegga Oktoobar 2016.
Saldhigga tareenka ee hadda jira ee Konya waa la dayactirey oo la dayactiray si loogu diyaariyo duullimaadyada 'YHT'. Si kastaba ha noqotee, marin u helidda xarunta jira ayaa xaddidan is dhexgalka xarunta iyo xarunta magaalada waa liidataa. Kadib furitaanka khadka Konya-Istanbul, gaar ahaan Khadka Ankara-Konya, kuma filna in la daboolo awoodda rakaabka ee jira. Sababtaas darteed, xarun cusub ayaa laga dhisayaa Konya Bugdaypazari Location waxaana la qorsheynayaa in la hawlgeliyo dhamaadka sanadka.
Sida Ankara YHT Station, dhismaha saldhiga, oo ay ku jiri doonaan xarunta wax laga iibsado, maqaayadaha, meelaha baabuurta la dhigto ee gudaha iyo banaanka, ayaa socda.
Ankara Etimesgut Xarunta Xarunta Diyaaradaha ee loo yaqaan “Ankara Etimesgut YHT Station Complex”
Dhismaha Xarunta Xirmooyinka ee loo yaqaan "YHT Station Complex" waxaa lagu dhisay aag u dhexeeya 157,7 hektar, waxaana jira Eryaman YHT Station, Xarunta Xawaaraha Sare ee Tareenka Sare ee Xaraashka iyo Xarumaha Tababarka ee loo yaqaan 'YHT Institution'.
Iyada oo la raacayo bartilmaameedka 2023 ee jidadka tareenka, Ankara waxay noqon doontaa xudunta isu-dheellitirnaanta isku-xidhka maareynta dalkeena ee 'YHT Management Network'. Sababtaas awgeed, xarunta ugu weyn ee shabakadda daryeelka HHT waxaa loogu talagalay Ankara. Ankara (Erya-man) Xaruntu Tareenka Sare ee Xawaaraha Sare ayaa la dhammeystirey.
Markii la go'aaminayo goobta xarunta dayactirka; u dhowaanshaha xarunta imaatinka imaatinka, imaatinka qadka tareenka, faaruq ah iyo guri siman ama dhul yar, qarashka qaan-goosashada oo hooseeya, u hoggaansanaanta qorshaha aagagga iyo helitaannada ayaa la tixgeliyey.
Baahida loo qorsheeyay dayactirka iyo saldhigga ee loo adeegsado xarummaha loo adeegsado ee loo yaqaan 'YHT' oo loogu talagay in lagu isticmaalo khadadka loo yaqaan 'YHT' ayaa u baahan xadka 46.568 m2 aag xiran, baahida loo qabo tas-hiilaad tababar oo loogu talagalay tababbarka shaqaalaha aqoonta u leh howl galada xawaaraha sare, iyo sameynta Saldhigga tareenka ee YHT ee Etimesgut / Ankara oo loogu talagalay kordhinta tirada rakaabka.
Shirkadda loo yaqaan 'YHT (Eryaman)' dhismaha dayactirka ugu weyn ee laga sameeyay Etimesgut;
●● Inta lagu jiro shaqooyinka dayactirka, gaas lagu sii dayn doono hawada waligeedna kiimikooyin looma adeegsan doono inay wasaqda ciida iyo biyaha,
●● Saliid, iwm. Oo dhici karta inta lagu guda jiro howlaha dayactirka. unugyada daaweynta cilmiga noolaha iyo kiimikada ayaa ku jiri doona Xarunta Dayactirka qashinka,
Building Dhismaha Tareenka Farshaxanka wuxuu kaloo leeyahay unug daweynta noolaha ah, iyo 90% biyo wasakh ah ayaa dib loo soo kaban doonaa,
Wasaqda saliid ee lagu ururiyo qeybaha daaweynta waxaa lagu keydin doonaa kayd gaar ah oo lagu tuuri doonaa,
Ma jiri doonno saliid ku sii daaya bulaacadda bulaacadaha,
Mane Wadooyinka tareenka ma buuq doonaan sababa la xiriira kaabayaasha korantada ee xarunta oo dhan.
Natiijo ahaan, daraasadaha mashruuca ee Xarumaha Dayactirka HHT waxaa loo fuliyay si habsami leh; shuruudaha caafimaadka aadanaha iyo deegaanka ayaa sidoo kale la tixgeliyey. Dhisme ka kooban Mashruuca dayactirka ee loo yaqaan 'YHT Maintenance Complex' ayaa la soo gabagabeeyey.
Yeni Eryaman YHT Station ayaa laga furay meel u dhow bakhaarka dayactirka weyn. Saldhigga cusub ee la dhisay iyo tareenka xawaare sare ku istaagaya dhanka galbeed ayaa lagu hayaa saldhiggan cusub halkii laga dhisi lahaa Xinjiang. Xarunta Eryaman YHT Station waxaa loogu talagalay inay ku dhexjirto xarunta loo yaqaan 'YHT Station Complex' oo ku taal bartamaha Wadada Ayaş, Ankara Ring Road iyo Wadada Istasyon si loo helo marin looga helo wadada weyn isla markaana lagu daro nidaamka tareenka magaalada.
Iskuxirka tareenka ee Etimesgut
Bursa, Turkey xiri doona oo dhan Speed ​​Tareen Line
tareenka-xawaaraha sare ee Turkey, gobolka labaad ee ugu weyn ee Konya
Maanta in History: markii ugu horeysay ee Turkey, tareen-xawaaraha sare ah August 18 2011 ...
Wadada Xawaaraha Sare ee Ankara Bursa
Etimesgut YHT Gar Qalabka